Inona ny niova? | NewsMada
Par Taratra sur 29/11/2016
Vita iny ny frankofonia! Inona ny niova? Samy nametraka io fanontaniana io ny rehetra, na nandritra ity raharaha manan-tantara ity, indrindra fa izao aoriany izao. Maro ny miteny mantsy: mitondra inona eto amintsika ity frankofonia ity?
Mety samy manana ny fiovana hitany sy andrasany ny rehetra, fa raha roritina kely aloha, sy ny resabe any anaty tambajotra sosialy, nanjavona avokoa ireo mpitandro filaminana marobe niasa nandritra iny herinandro ambony iny. Vao nipaika ny alatsinainy, nangingina ny tanana, tsy tazana ry zareo. Mety maka aina fa reraky ny asa andro aman’alina.
Mendri-piderana kosa aloha raha ireny fihetsiketsehana nataon-dry zareo mpitandro filaminana ireny, satria tsy afa-mikofoka hatramin’ny voalavo, hoy ny fiteny. Tena maro ireo mpitandro filaminana ireo raha ny tazana tamin’ireny frankofonia ireny.
Fa raha izay hamaroany izay no ampiasaina amin’ny andro andavanandro fa tsy amin’ny fotoan-dehibe tahaka iny efa vita iny, mety hihena tanteraka ny asan-jiolahy sy ny asan-dahalo. “Maninona moa raha alefa any amin’ny toerana be dahalo izy ireny e? Maninona raha miasa isaky ny fokontany eto an-dRenivohitra ireny mpitandro filaminana ireny?”, hoy ny fimenomenomana any anaty tambajotra sosialy.
Marina izany, mety mba hampisy toky ho an’ny olona ny fahitana azy ireny mitsatoka sy mijorojoro milanja basy eny rehetra eny. Na ireo mikasa hangalatra ireo “zava-bita” aza mety tsy ho sahy. Ireo dahalo, mba hifandanja ny hery rehefa mifandona any amin’ny faritra atsimo any rehefa lasa any ireo mpitandro filaminana marobe ireo.
Farany, na eo aza ny polisy sy ny zandary natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany, tompon’andraikitra amin’ny fiarovana ny manodidina azy koa ny rehetra. Ireo zavatra efa mipetraka, toy ny jiro, “panneau solaire”, ny “camera” an-dalambe, mba tsy tokony hangalarina e. Mahasoa ny rehetra ny fisian’ireny ka tokony arovana. Izany hoe mila manova toetsaina ny “mpangalatra”, ary mba hitia izay ananana ny vahoaka. Amin’izay, mba hisy mihitsy ny zavatra “miova”.